Na-ekpochi ntụrụndụ nke Raja na SandPebblesTours
Odisha - Ala nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nke India, na-ebi ndụ mgbe nile n'eziokwu ya na ọdịnala ya, & a maara ya nke ọma gburugburu ụwa maka ọdịbendị ya na ebe obibi ya. Otú ọ dị, oge kachasị mma iji gaa na steeti bụ mgbe ememme Raja a ma ama malitere. Ọ bụ oge a pụrụ ịhụ omenala na ọdịbendị nke ebe a kacha mma.
"Raja Parba" ma ọ bụ "Raja" - Ọ bụ otu ihe ahụ ọ dị. Ọ bụ ụbọchị a ma ama ụbọchị atọ a na-eme na Odisha na etiti ọnwa June. Ndị mmadụ kwenyere na chi nwanyị nke ụwa na-enwe nsọ nsọ na ụbọchị 3 mbụ nke ememme ahụ, ebe ụbọchị nke abụọ ya bụ mmalite nke ọnwa Mithuna. Ọ bụ mgbe oge mmiri ozuzo setịpụrụ.
Site na swings & songs na nri, ọchị, na ihe ọzọ, ememe ntụrụndụ na-enye ezigbo nhazi nke ochie na nke ọhụrụ, na-eme ka a mara mma nke ihe ị ga-eme. N'ezie, ọ bụ ahụmahụ ezumike ntụrụndụ e mere na ọkwa ọzọ.
Ihe ndị a
N'oge ememe 3 a, ndị inyom na-ezumike site n'ọrụ ha na-arụ n'oge obibi ha & nwee ụfọdụ n'ime ime ụlọ na egwuregwu ime. Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị iji oge ndị a mara ihe site n'itinye ihe ọhụrụ site na ejiji ọhụrụ ma ọ bụ na-eme ka Sarees na Agatha dị n'ụkwụ ha, & ọ dịghị onye na-ejegharị n'ụkwụ n'elu ala.
Ime Oke Ohere A
Ọfọn, karịa ihe niile, echefula ohere iji gaa Odisha n'oge Ememme Raja na akpụkpọ anụ Njem N Njem! Ihe a na-eri na achicha ahụ, Sand Pebbles Tour N Njem na-enye aka nchịkọta 10% iji mee ka ị nwee mmetụta nke obi ụtọ. Na ihe karịrị 60 na-eme ka ụgbọala ndị dị oké ọnụ ahịa na-eme, anyị na-ahapụ gị ka ị gaa n'akụkụ dị iche iche nke steeti ka gị na ndị ị hụrụ n'anya na-eme ememe ahụ na agba ya. Na, ọ dịghị onye nwere ike idaba nchekwa na nkasi obi nke klaasị anyị. Were oge dị egwu mgbe ị na-egwu egwú, na-abụ abụ, ma na-egwu egwuregwu egwuregwu ọ bụla n'akụkụ Odisha na anyị na-eme ka ihe na-eme gị maka ọrụ njem njem anyị.
Bịakwute anyị oge ọ bụla na + 91-993.702.7574 ma ọ bụ gaa na sandpebblestours.com/raja-utsav-odisha. Dee njem gị ugbu a ma gaa njem nlegharị anya, na-achọgharị amaokwu niile a ma ama na steeti.
Nwee Ahụmahụ Ezumike Na-enweghị Mkpa Site na ịhọrọ Sand Pebbles 'International Tour Compakọta